Nagu saabsan - Xidhmada Weyn ee Lacagta (ShenZhen) Co., Ltd.
GS PACK, xafiiska guud ee Hongkong, oo la aasaasay 1993, wuxuu ku yaal agagaarka quruxda badan ee Shiyan Lake Vacation. Dalxiis ee GuangMing Degmada Cusub, Shenzhen, Shiinaha. 20 daqiiqo oo safar ah garoonka diyaaradaha caalamiga ee Shenzhen. Waxaan nahay mid ka mid ah soo saarayaasha xirfadleyda ugu waaweyn ee soo saara filimka yareynta polyolefin ee Shiinaha. Iyo kii ugu weynaa ee wax soo saara koonfurta Shiinaha oo leh in ka badan 19 sano oo khibrad u leh soo saarista ayaa hoos u dhigaya qalabka wax lagu duubo.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan iska leenahay GS Standard, GSS LT, G SHot Slip, GS Super 11 & 10micornP OF filunci filim. Iyada oo leh awood daraasad xoog leh, iyo koox horumarineed oo sifiican diirada u saareysa sii wadida soosaarida noocyo kala duwan oo 5-Layer Co-extruded ah qalabka wax lagu duubo ee polyolefin Tayada xasilloon iyo waxqabadka sare ee filimadayada. Ka dhigaysa mid si fiican ula jaan qaada Buugga, Semi-otomaatigga iyo mashiinnada wax lagu duubo ee soo gaabiyo.
Warshaddeenu waxay daboolaysaa 20,000 mitir laba jibbaaran oo leh 7 otomaatig ah khadadka wax soo saarka ee POF5layerCo-Extruded Shrink. Kheyraad hodan ah iyo raasumaal xoog leh, wax soo saar sanadle ah waa 12000ton (Baaxadda Ugu Badan: 3500mm) sidaa darteedna hadda waxaan noqoneynaa soo saare weyn oo xirfadlayaal ah soo saarista nooca bey'ada u fiican (P OF) 5-lakabka Co oo la soo saaray. Filimada Yareeya ee Filimada Koonfurta Shiinaha.
Ka sokow isticmaaleyaasha dhammaadka, waxaan u magacaabannaa iibiyeyaal badan iyo wakiillada iibka si aan u ballaarinno suuqa Shiinaha iyo dibedda. Wax soosaarkayagu waxaa loo soo gudbiyey in ka badan 70 dal oo adduunka oo dhan ah iyo sidoo kale dhammaan aagagga Shiinaha, waxaan ka helnay sumcad sare & wanaagsan macaamiisheena nooca ah inta lagu gudajiray isku-duwidda muddada dheer & xasilloonida ganacsiga ee suuqyada iyo suuqa gudaha.
Tayo sare, qiimo tartan iyo adeega ugu fiican ayaa ka dhigay usa hogaamiyaha warshadaha filimada oo yaraada.
Ixtiraam oo faham macaamiisha, sii wad inaad siiso alaabooyin iyo adeegyo ka sarreeya rajooyinka macaamiisha, oo noqo macaamiil weligeed ah macaamiil. Tani waa fikradda adeegga ee aan had iyo jeer ku adkaysan jirnay una doodnay.
Tallaabo kasta, waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca ayaa ah in ka dib markii ay shirkaddu ka beddeshay suuqa iibiyaha una beddelay suuqa iibsadaha, fikradaha isticmaalka macaamiisha ay is beddeleen. Iyagoo wajahaya badeecooyin badan (ama adeegyo), macaamiisha ayaa diyaar u ah inay aqbalaan badeecooyin tayo wanaagsan leh (ama adeegyo). Tayada halkan ku taal ma aha oo kaliya inay tilmaamayso tayada wax soo saar ee badeecada, laakiin sidoo kale waxaa ku jira arrimo taxane ah sida tayada baakadaha iyo tayada adeegga. Sidaa darteed, baahiyaha macaamiisha waa inay ahaadaan kuwo si buuxda ugu qanacsan.
◇ Waa inuu istaagaa booska macaamiisha (ama macaamiisha) halkii uu ka istaagi lahaa booska shirkadda si loo baaro, loo naqshadeeyo loona horumariyo adeegyada.
◇ Hagaajinta nidaamka adeegga, xoojinta iibka ka hor, iibka, iyo adeegyada iibka kadib, isla markaana si dhakhso leh uga caawiya macaamiisha xallinta dhibaatooyinka kala duwan ee isticmaalka badeecadaha, si ay macaamiisha u dareemaan raaxo weyn.
Importance Ku dheji muhiimadda weyn fikradaha macmiilka, u oggolow macaamiisha inay ka qaybgalaan go'aan qaadashada, oo ay ula dhaqmaan fikradaha macmiilka qayb muhiim ah oo ka mid ah qancinta macaamiisha.
◇ Samee wax kasta oo suurtagal ah si aad u haysato macaamiisha jira.
Samee dhammaan farsamooyinka ku saleysan macaamiisha. Aasaasidda hay'ado kala duwan, dib u habeynta howlaha, iwm, waa inay diiradda saaraan baahida macaamiisha isla markaana la dejiyaa qaab jawaab deg deg ah oo ku saabsan fikradaha macaamiisha.
Macaamiilku had iyo jeer waa sax yahay.
Marka hore, macaamilku waa iibsadaha badeecada, ma ahan qaswade.
Ta labaad, macaamiisha waxay fahmaan baahidooda iyo hiwaayadaha ay leeyihiin, taas oo si sax ah u ah macluumaadka ay shirkadaha u baahan yihiin inay ururiyaan.
Seddexaad, maxaa yeelay macaamiisha waxay leeyihiin "joogteyn dabiici ah", la doodida isla macaamiisha ayaa la murmeysa macaamiisha oo dhan.
Saddex walxood oo qancinta macaamiisha
Ku qanacsanaanta badeecada: waxaa loola jeedaa qanacsanaanta macaamiisha tayada sheyga.
Ku qanacsanaanta adeegga: waxaa loola jeedaa aragtida wanaagsan ee macaamiisha ee ku aaddan iibka ka hor, iibka iyo ka dib iibka ee alaabada la soo iibsaday. Si kasta oo sheygu u fiicanyahay iyo sida macquul u yahay qiimaha, markay ka soo muuqato suuqa, waa inay ku tiirsanaato adeegyada. "Adeegga iibka kadib wuxuu abuuraa macaamiil joogto ah."
Ku qanacsanaanta muuqaalka shirkadaha: waxaa loola jeedaa qiimeynta wanaagsan ee dadweynaha ee guud ahaan xoogga iyo aragtida guud ee shirkadda.
"5S" waxaa loola jeedaa soo gaabinta ereyada Ingiriisiga ee shanta erey ee "SMILE, SPEED, SINCERITY, SMART, and Study".
Fikradda "5S" waa hal-abuurnimo dhaqan adeeg, taas oo aan kaliya yeelanayn astaamaha xilliyadii bini-aadamnimada, laakiin sidoo kale leh firfircooni badan.
Dhoolacadeynta: waxaa loola jeedaa dhoola cadeyn dhexdhexaad ah. Tilmaamaha wax iibsiga waa inay tixgeliyaan macaamiisha ka hor inta aysan dhoola cadeyn dhab ah sameyn. Dhoolacaddeyntu waxay muujin kartaa mahadnaq iyo dulqaadasho qalbiga ka jirta, dhoollacaddayntu waxay noqon kartaa mid faraxsan, caafimaad leh, oo tixgelin leh.
Xawaare: waxaa loola jeedaa "tallaabo deg deg ah", waxay leedahay laba macne: mid waa xawaare jireed, yacni, isku day inaad u shaqeyso sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, hana u oggolaan macaamiisha inay sugaan muddo dheer; tan labaad waa xawaaraha soo bandhigida, ficillada daacadnimada iyo tixgelinta leh ee hagaha dukaameysiga Qalbigu wuxuu kicin doonaa qanacsanaanta macaamiisha, si aysan u dareemin in waqtiga sugitaanku uu aad u dheer yahay, ayna ku muujiyaan firfircooni ficil deg deg ah. U oggolaan la'aanta macaamiisha inay tahay halbeeg muhiim u ah tayada adeegga.
Daacadnimo: Haddii hagaha wax iibsiga uu leeyahay daacadnimo uu ugu adeegayo macaamiisha qalbigiisa oo dhan, macaamiisha hubaal way qadarin doonaan. La shaqeynta dabeecad daacadnimo iyo munaafaqnimo la'aan waa caqli aasaasi ah oo muhiim ah oo hagaha dukaameysiga iyo mabda'a aasaasiga ah ee la macaamilka dadka kale.
Dabacsanaanta: Waxaa loola jeedaa "caqli badan, hagaagsan oo hagaagsan." Ku qaabilaadda macaamiisha qaab nadiif ah oo hagaagsan, alaabooyinka wax lagu duubo oo ay ku dheehantahay hufnaan, firfircoonaan, iyo xarrago, iyo ku kasbashada kalsoonida macaamiisha dabeecad shaqo oo dabacsan oo xariif ah.
Cilmi baaris: Had iyo jeer bar oo baro aqoonta wax soo saarka, cilmi baarista cilmu-nafsiga macaamiisha iyo soo dhaweynta iyo la qabsiga xirfadaha. Haddii aad si adag uga shaqeysid barashada cilmu-nafsiga wax iibsiga ee macaamiisha, xirfadaha adeegga iibinta, iyo inaad wax badan ka barato khibradda wax soo saarka, kaliya ma hagaajin doontid soo dhoweynta macaamiisha, laakiin sidoo kale waxaad yeelan doontaa natiijooyin wanaagsan.
Dabcan, waxaan ganacsi ugu horreynaa sameynta lacag, laakiin maahan oo keliya lacag, laakiin ma ahan oo keliya faa'iido.
◇ Macaashku waa abaalmarinta adeegga tayada leh. Nidaamka raadinta macaashka ayaa ah in macaamiisha ay si ikhtiyaari ah ugu laabtaan xarunta qanacsanaanta iyada oo loo marayo u heellan sida cimilada guga, oo ay na siiso lacagta bilaa cabasho iyo mahadnaq
◇ Ha ku degdegin guusha degdegga ah, u beddelo adeegga boobka, baadda iyo khiyaanada.
Kala Bixinta Filimka Vs Duubista, Yaree Filimka PCv, Iskudhin Duubista Filimada, Polyolefin Pof Shrink Film, Polyolefin Iskudhin Heerkulka, Duubista Polyolefin Pof,